လေ့လာရန် - fastforward
သင့်ရဲ့ eCommerceလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် ကူညီထောက်ပံပေးမယ့်အရာတွေ
မြန်မာပြည်ရဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေပြောပြတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ရှင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲတွေနဲ့၊သူတို့ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်သွားလည်းဆိုတာတွေကို အချိန်ပေးပြီး နားထောင်ကြည့်ပါ။ အစားအသောက်လုပ်ငန်းကစလို့ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းတွေအထိ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ ဘယ်လိုရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတာတွေကို အသေးစိတ်လေ့လာပါ။
eCommerceလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ အကြံညဏ် သုံသပ်ချက်တွေကို အချိန်၁၅လောက်ပေးရုံနဲ့ နားဆင်နိုင်မယ့် အသံဖိုင်သင်ခန်းစာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်စာစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယက်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင်းခန်းလုပ်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
How did COVID impact business in Myanmar?
How has consumer behavior changed due to Covid?
Government response to eCommerce during COVID
eCommerce opportunities in Myanmar
Effective marketing strategies for your online shop
What is good design and why is it important for your online shop?
What are good design practices you can use for your online shop?